ExactTarget ले ग्राहक सेवालाई एक ठूलो (सामाजिक) खाजा लिन्छ Martech Zone
बिहीबार, जुलाई 9, 2009 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
आज बिहान, मैले यहाँकाबाट एक ईमेल प्राप्त गरे ExactTarget त्यसमा भनिएको छ कि उनीहरूको ग्राहक पोर्टललाई केस व्यवस्थापन समावेश गर्न अपग्रेड गरिएको थियो। यो केवल कुनै सानो ग्राहक पोर्टल होईन, यद्यपि! ExactTarget 3sixty एक पूर्ण रूपमा कार्यरत ग्राहक केन्द्रित सामाजिक नेटवर्कको साथ एकीकृत छ केस व्यवस्थापन, उत्पादन सिफारिशहरूएक प्रशिक्षण पुस्तकालय र फोरम ग्राहकहरुलाई एक अर्को मद्दत गर्न को लागी।
म बाहिर पुग्यो ExactTarget आज र तपाईं भन्न सक्नुहुनेछ कि उनीहरू हावामा गुजारा थियो! जेफ रोहर्स, मिच फ्रेजर र स्टेफनी जिरचेर सबैले मलाई केहि राम्रो जानकारी पठाए र साथमा केही प्रभावशाली तथ्या .्कहरू सहित। बधाई यसको शुभारंभमा स्टेफनीमा जान्छन् ... उनी आश्चर्यजनक थिइन जब म उनीबाटै काम गर्थें र उनी यस श्रेयको साथ आफ्नो टीमको साथ योग्य छन्।
Si०xty मा अब १ 3,००० भन्दा बढी सदस्यहरू छन्
उत्पादनको लागि करीव १०० ग्राहक-सिफारिस गरिएको विचारहरू si एसिटिमा प्रतिक्रियाको माध्यमबाट बनाइएको थियो
ग्लोबल उत्पादन समर्थन 24-7? अनलाईन ग्राहक समर्थनबाट ब्याकअफिस + फोन समर्थन मार्फत
ईमेल सेवा प्रदायक ठाउँ राम्रो प्रतिस्पर्धी छ। ग्राहक समर्थन र ग्राहक सेवामा ध्यान दिन यो एक्स्ट्याक्टट्याजेटको धेरै फोरवर्ड सोच हो। तपाईं ईन्टरनेटमा कुनै पनि ईमेल सेवा प्रदायकहरूबाट ईमेल पठाउन सक्नुहुनेछ ... यस्तो देखिन्छ कि १ अब हरेक हप्ता पप हुँदैछ। एक्स्ट्याक्टरेटले अनुकूलन, गतिशील सन्देश सक्षम पार्न सक्षमताको क्षमतासहित धेरै जसो ईएसपीहरू भन्दा भिन्न छ को उद्योगमा सब भन्दा परिष्कृत र द्रुत आउटबाउन्ड मेल व्यवस्थापन प्रणालीहरू।
एक्स्ट्याक्टरेटमा काम गरिसकेपछि, म तपाईंलाई भन्न सक्दछु कि यो सब भन्दा प्रतिभाशाली र हो इंडियानापोलिसमा राम्रो नेतृत्वमा कम्पनीहरू। म त्यहाँ टीमको लागि अत्यन्त सम्मान गर्दछु र कम्पनीसँग मेरो समयको आनन्द लिन्छु।
यो बजारमा वास्तवमै एक ठूलो भिन्नता हो ... एक कम्पनी जसले आफ्ना ग्राहकहरूको सेवा गर्ने क्षमतालाई बढावा दिन्छ, केवल उनीहरूलाई उत्पादन प्रदान गर्दैन। मैले त्योभन्दा पहिले लेखेको थिएँ सास कुञ्जी केवल प्लेटफर्म होईन - तर प्रयोगकर्ताहरूलाई प्लेटफर्मको लाभ उठाउन सक्षम गर्दै।
? Sisxty ईमेल मार्केटरहरू मार्केटिंगमा वर्तमान मुद्दाहरू छलफल गर्न वा सफ्टवेयर, यसको कार्यक्षमता वा वर्तमानमा अनुप्रयोगमा अनुभव गरिरहेका कुनै पनि मुद्दाहरूको बारेमा हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न उनीहरूका साथीहरूसँग संलग्न हुनको लागि छनौटको स्थान भएको छ? स्टेफनी Zircher, राम्रो मित्र र 3sixty को ExactTarget निर्देशक भने। "Si एसिस्टीमा ब्याक अफिसको परिचय उद्योगको एकमात्र एक रोक्ने सामाजिक नेटवर्कि site साइट प्रदान गर्दछ जसले विशेष ग्राहक मात्र शिक्षा, समर्थन अनुरोध र अनलाइन सहयोग प्रदान गर्दछ।"
शानदार कार्यक्षमताको साथसाथै, उत्पादको उपयोगिता बकाइको पनि छ - प्रत्येक फीचर सफासँग आफ्नै प्यानलमा संगठितको साथ। यो एक सुन्दर अनुप्रयोग हो:
IMHO, ठूलो कम्पनीहरूको ईमेलको ठूलो मात्राको साथ बजारमा राम्रो ईमेल सेवा प्रदायक भेट्टाउने छैन। त्यहाँ केही उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धीहरू छन्, तर ExactTarget गृहनगर मनपर्ने छ।
पूरा प्रेस विज्ञप्ति पढ्न निश्चित गर्नुहोस् ExactTarget को ब्याकअफिस मा।
टैग: isaacलौरा लिप्पेप्यू अनुसन्धान
तपाईं ठिक हुनुहुन्छ । बजार मा प्रतिस्पर्धीहरु छन् तर .. ExactTarget> अन्य
जुलाई,, २०१ at 11::2009। बिहान
उत्कृष्ट पोष्ट म awebber केहि महीनाहरु को लागी प्रयोग गरीरहेको छु र मैले संचालित एक साइट मा यसको साथ मलाई केही कठिनाई भइरहेको छ। यसले पार्सर समस्या समाधान गर्न aweber केहि महिना लिएको छ। ग्राहक सेवाहरूले सकेसम्म मेरो विकासकर्तासँग काम गरे तर उनीहरूका विकासकर्ताहरूले उनीहरूलाई मुद्दामा हेरेर उनीहरू ज्यादै चिन्तित थिए।
ExactTarget को बारे मा दयालु शब्दहरु को लागी धन्यवाद। हामी त्यहाँ जे पूरा गर्दैछौं त्यसको लागि हामी सबैलाई गर्व छ। स्टेफनी पक्का लागि एक रक स्टार हो। (संगीत मा पनि राम्रो स्वाद)
सेवा र समर्थन सा सा का सबैभन्दा बढी प्रशंसा गरिएको पक्ष मध्ये एक हो। आज, सबै आकारका व्यवसायहरू उनीहरूको सफ्टवेयरमा निर्भर गर्दछन् महत्त्वपूर्ण मिशनको रूपमा। यो केवल मौकामा छोड्न सकिदैन, वा तपाईको पछाडि कोही नहुँदा घरमा बढि समाधानको अविश्वसनीयता। स्कट म्याकोकोर्कलले भनेजस्तै यो 'सँधै' हुनुपर्दछ।
तपाईं शर्त, क्रिस! मलाई लाग्छ तपाईं सेवाको बिल्कुल सही हुनुहुन्छ र समर्थनलाई सराहना गरिँदै छ। र स्कट म्याकोर्कलको लागि कुडोस - ऊ एक महान मान्छे हो र निश्चित रूपमा 'जहाज पल्टिएको छ' 'र एक ठूलो दिशामा एक्स्क्टार्टलाई हेड गर्दैछ। त्यहाँ ठूलो मान्छेहरू!